Usuku Lokusekela Umhlaba - Ngangineminyaka ebuntwaneni ngine-ranch, futhi enye yezinto eziyinhloko okudingeka uyenze lapho uthola ukuthi ukushayela ugandaganda yiziphi izindlela zokuhambisa phansi. Ezinsukwini ezithile engizifungayo kubonakala sengathi wehla kakhulu kunalokho ozayo. Nginomuzwa wokuthi umzila emsebenzini njalo kaningi.
Ezweni le-tech, ukwehla, uma wenza impendulo noma ufaka idatha yakho, kuyinto ebalulekile. Uma kungenzeka ukuthi idatha ibalulekile emsebenzini wakho, ujwayele ukuxhaswa njalo. Ngaleso sikhathi, uma kunoma yikuphi ukudumala okuphumela ekubikeni kwemininingwane, usuke uphinde ululame idatha yakho kusuka kwisipele sakamuva. Kungaba yindlela yokuphila.
Yingakho kubalulekile ukubona zonke izitaladi zihamba ngoMashi 31, Usuku Lokusekela Umhlaba.
Kuzwakala okwanele, kepha ukuhambisa phansi idatha yakho kungabiza futhi kuyinkimbinkimbi. Ngenkathi amaDVD eDatha ehambela kahle, ukushayela ngaphandle kanzima kungabiza kakhulu nakuba kungabiza kubi ngaphezu kweminyaka emihlanu ngaphambili. Ngenhlanhla, kubonakala sengathi kunezinye izindlela zokugcina izinto ezifuywe ngamafu ziqhubekela phezulu ngokucacile ngokulinganisela. Uma kwenzeka udinga ukuvakashelwe ukuvakasha, khona-ke uzodinga amandla amaningi. Ngokuhambisana nesilinganiso sedatha oyitholile, kufanelekile ukwazi ukuthi iseshini yakho yokusekelayo ingathatha isikhashana.
Kunoma yikuphi, manje nganoma yisiphi isikhathi uSuku lwe-Backup World lusuka, ngizama ukulondoloza wonke oxhumana nabo, imilayezo, unyaka wama-tweets, nayo yonke iminye imifudlana yami yedatha. Ngahamba ngosuku lweSpip World Backup eminyakeni emine ngaphambi kokuhweba ku-Twitter. Kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, ngiye ngaqinisekisa ukuthi izipele zami zihlukile emvelweni futhi aziphathwanga ngombono wokugcina "konke ukutshala kwami ​​okuboshwe endaweni eyodwa." Lo mqondo wengqondo ngokuqinisekile uzobangela ukuthi izinkinga zingene endleleni.
Ngokufanayo uma uhlola izixwayiso zakho zensimbi futhi ushintshe amabhethri njalo isikhathi sokulondolozwa kweSuku lokuKhanya kweSuku, ngizibekela eceleni ukubeka eceleni isikhathi somcimbi wami wokugcina ongasenakukwazi ukuwukhumbula ngosuku lomhlaba wokulondoloza. Ngiphinde ngiyibeke njengengxenye yonke yosuku ngosuku lwami lwe-Outlook. Lokhu kunenzuzo eyengeziwe yokuvikela abantu bangangamukela emibuthanweni!
Njengoba kubalulekile nakakhulu idatha yedatha yokulondoloza, ngiyifaka futhi ukuthi ngiyisebenzisana nemininingwane yami, futhi. Ama-gigabytes ami amarekhodi ngabanye afana nezithombe ezibalulekile, ngakho-ke izithombe zomndeni, ukuqoshwa kwekhaya, imibhalo enegunya, imiyalezo kanye nomculo we-80s remix mp3s ngokungeziwe ukuthi ihamba ngokugcwele kwiDVD yedatha, efwini, nakwi-hard drive yangaphandle.
Iqiniso liyaziwa, ngivame ukujabulela ukusebenzisa ama-backups amaningi. Ukuba ngumthengi we-Mac, ukusekela okulondoloziwe kuye kwaba lula ngempela, futhi manje ifu lenze izipele ezingadingeki kakhulu. Kusuka kokukhanselwa okungakahlelwa kokungcola noma kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuthi ngidinga idatha encane esikhathini sangaphambili, ngiyakwazi ukuthola idatha yami ngokuqiniseka. Ngenye yalezi zimbhangqwana zomgudu wokuphila; kuncike lapho kimi.
Ukukhuluma ngezimiso zomhlaba, Usuku Lokusekela Umhlaba luyengeza futhi ithuba lokubonga abantu abaphathiswe ukuhlaselwa kwenhlekelele ebambiswaneni bakho. Ukwenza uhlelo oluhle lokuphulukiswa kwe-debacle kuyingozi noma kulula. Ukuqhubeka nokuphumelela kobudlelwane bakho kuxhomeke ekusikeleni okunamandla nokubuyisela emuva, ngakho ukubona lolo suku kuningi mayelana nendlela yokuhamba phansi kwedatha njengoba ibona abantu abasisizayo ngenkathi kudutshulwa idatha.
Ngakho ngo-March 31 noma usuku lwakamuva kakhulu kunoma iyiphi inyanga, zama ukwehla amarekhodi akho. Ngokufanayo ungathatha isithembiso seSuku Lokusekela Umhlaba ngokuphakamisa isandla sakho esifanele nokuvuselela kabusha, "Ngisho [igama lakho] ngethembiso enkulu yokuhambisa phansi imibhalo yami ebalulekile kanye nezikhumbuzo ezibalulekile ngoMashi 31st."
Innovative Technology Solution ukucela ukuthi uhlale ukhumbule ukuthi ugaya, ufundise abathandekayo bakho ngokuphathelene nosuku lwe-World Backup ngokubheka ukuthi abangane abakhululi abangane ngaphandle kokusekela.
Indlela Yokuthuthukisa Ithimba Lephrojekthi Ukuphumelela ngokusebenzisa Amakhono Okuphathwa Kwephrojekthi